हेवीवेटलाई यस्ताे चुनाैती... | Nepalese.org - No. 1 News Portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actoress, Audio, Video, Interview
हेवीवेटलाई यस्ताे चुनाैती…
काठमाडौं। नुवाकोटबाट पटक—पटक चुनाव जितेका उम्मेदवारलाई यस पटक चुनौति देखिएको छ । बाम गठबन्धन बनेकाले पहिलेको विरासत जोगाउन खासगरी कांग्रेस उम्मेदवारलाई कठिन देखिएको छ । ०५१, ०५६ ०६४ र ०७० साल गरी चार पटक नुवाकोटबाट सांसद् बनेका डा. रामशरण महत पहिलेभन्दा अहिले निर्वाचनको प्रचार प्रसारमा बढी कसिनु परेको छ । नुवाकोट क्षेत्र २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार डा. महत छ पटक अर्थ मन्त्री र एक पटक पराराष्ट्र मन्त्रीको जिम्मेवारी समालीसकेका व्यक्ति हुन् ।
नयाँ मतदाताले शैक्षिक वेरोजगारी तथा विकासका मुद्धा उठाउनेलाई भोट दिन चाहेको देखिन्छ । युवा उम्मेदवार नएकाले ती भोट दुई पार्टी बाहेक अरुमा खासै नजाने त्रिशुली बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक रामबहादुर थापाको भनाइ छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा समाचार छ ।